Baarista Kalfadhi: 11 kulan oo ka baaqday iyo 120 xildhibaan oo ka maqan Golaha Shacabka – Kalfadhi
Golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ah ayaa toddobaadkan galay fasax kooban oo ciida ah, iyada oo howlaha kalfadhiga shannaad la qorsheeyay inay dib u bilowdaan ciidda kadib. Laakiin kalfadhigan oo toddobaadyo dib uga dhacay xilliga rasmiga ah ee uu bilaaban lahaa oo ahayd horraantii Maarso waxaa harreeyay caqabado shaqo gudasho la’aan ah, iyo kulamo baaqasho.
Golaha Shacabka ayay ahayd inay yeeshaan 23 kulan intii u dhaxeysay Maarso ilaa 22da May. Balse xog-ururinta warbaahinta KALFADHI waxa ay muujineysaan in Golahu kulmay kala-bar uun intee laga filayay. 12 kulan oo keli ah ayay yeesheen, 11 kulan oo kale waxa ay u baaqdeen kooramka, iclaamin la’aan iyo khilaaf baarlamaanka dhexdiisa ah.
Kulamadda Golaha Shacabka ayaa ku furmi kara inay joogaan 138 xildhibaan, laakiin Kulamada 11ka ah ee baaqday waxaa yimid tiro xildhibaanno ah oo intaa ka yar. Kulankii 1da May oo keli ah ayaa u qabsoomi waayay fasax qaran maadaama ay ahayd maalinta shaqaalaha. Celceliska xildhibaanada soo xaadiray kulamada qabsoomay ayaa noqday fadhigiiba 155 mudane. Taas waxa ay ka dhigan tahay in fadhi walba ay ka maqnaayeen ilaa 120 xildhibaan, iyada oo aysan kala cadeyn kuwa fasaxa ku maqan, iyo kuwa idan la’aan baaqday.
Gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Sheikh Cabdiraxmaan ayaa 6dii Maajo amray in la yeeriyo magacyada xildhibaanada maqan si loola xisaabtamo isla markaasna dadku u ogaadaan, maadama kooramku uu maalintaas u baaqday la’aantood isla markaasna ay hawlo muhiim ahi u istaageen. Wuxuu ahaa kulan ay xildhibaanada soo xaadiray oo ahaa 132 mudane ay sugayeen inta uu kooramka ka buuxsamayo ilaa 1:30 duhurnimo balse ma aysan suuroobin.
Gudoomiyaha golaha Shacabka BFS Maxamed Mursal Sheikh iyo ku xigeenkiisa koowad oo gudoominaya shirka guddiga joogtada ah /Baarlamanka.
Xildhibaanada ka maqan fadhiyada ayaa badankood jooga gudaha Muqdisho, sida ay sheegeen hab-dhawrayaasha golaha shacabka 7dii Maajo. Baaqashada kulamada Golaha Shacabka waxa ay dhaceysaa iyada oo Golaha ay hor yaalaan sharciyo muhiim u ah dhismaha dowladnimada Soomaaliya, iyo doorashada 2020/21. Kalfadhigan oo soo xirmi doona bisha Luulyo waxaa Golaha Shacabka hor yaala 11 sharci oo uu ka mid yahay xeerka doorashada, hindise sharciyeedka La-dagaalanka Aragagixisada, Hindise sharciyeedka waxbarashadda, iyo xeerka saxaafadda.
Doorashada labo xubnood oo ka dhinnaa guddiga dib u eegista dastuurka 4 Maajo, 2019 /Baarlamanka
Mudadii lagu jiray Kalfadhigii afraad ee golaha shacabka ayaa sidaas oo kale ay kulamo badani ugu baaqdeen sababo la xiriira kooramka iyo xiisad siyaasadeed oo kala dhex gashay hoggaanka baarlamaanka iyo xukuumadda. Gudoomiye Mursal ayaa sheegay in kalfadhigaas ay ansixiyeen shan sharci oo keliya.